Xildhibaanada cusub oo markale Muqdisho ku shirsan iyo 17 horleh oo ladhaariyey. – Radio Daljir
Xildhibaanada cusub oo markale Muqdisho ku shirsan iyo 17 horleh oo ladhaariyey.
Diseembar 31, 2016 3:06 b 0
Muqdisho, Dec 31 2016-Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya ayaa waxaa maanta mar kale ka furay kulan ay leeyihiin xildhibaanada labada aqal ee dalka iyadoona lagu dhaariyey 17 kamid ah barlamaanka cusub.
Mudada uu socdo kulanka xildhibaanada labada ee barlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa lagu magacaabi doonaa Guddiyo ka shaqeeya arrimaha Doorashada iyo xilliga ay dhaceyso Doorashada Guddoonka Baarlamaanka iyo mida Madaxweynaha.
27-kii Bishan ayaa Muqdisho lagu dhaariyay 283 Xubnood oo ka tirsan labada Aqal ee dalka, waxaana dhiman xubno kale kuwaas oo aan qaarna wali la dooran halka kuwana lagu eedeeyay in ay ku soo baxeen qaab aan waafaqsaneyn sharciga Doorashada dibna loo celiyay.
DHEGEYSO-Maamulka gobnolka Mudug oo kahadlay xiisaddii Dudun.